Ikhaya elithulile w/I-Graevaila Meadows Golf Course View! - I-Airbnb
Ikhaya elithulile w/I-Graevaila Meadows Golf Course View!
Graeagle, California, i-United States
Indlela yokuphila ye-idyllic alpine izoba ngeyakho kule ndlu enamakamelo okulala angu-2, indlu yokuqasha yeholide enamagumbi okugezela angu-2.5 e-Graevaila. Izihambi ezingaba ngu-4 zizojabulela intaba, umfula, kanye nendawo yokudlala igalofu kusuka kuvulande onempahla ezungezwe ihlathi lase-Sierra. Uzoba phakathi nohambo lwezinyawo lwemizuzu engu-10 ukuya enkabeni yedolobha ebonisa abathengisi abayingqayizivele, amathilomu athokomele, nokudla kwendawo. Ihlotshiswe ngamachibi, le ndawo iqinisekile ukuthi izokuhlaba umxhwele ngamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka e-Gold Lake, e-Goose Lake, noma e-Haven Lake ngemizuzu engu-15 nje kude!
Ikamelo 1: Umbhede omkhulu | Ikamelo lokulala 2:
Umbhede omkhulu Akungabazeki ukuthi uzofuna ukuchitha isikhathi sasemini ngaphandle kwevulandi elingemuva eliqhayisa ngokubuka i-Graevaila Meadows Golf Course. Ungase ngisho ubone izimuncu-muncu ezizulazula ekuseni!
I-Hunter green sofa egumbini lokuphumula futhi ikumema ukuthi ube nesihlalo phambi kwe-flat-screen cable TV. Hlola amaphrinta ezithombe zendawo ezihlobisa leli khaya lase-California!
Awukho umkhawulo kulokho ongakusungula ekhishini elinakho konke okudingekayo. Isitolo sokudla esiseduze singaphansi kokuhambahamba kwemizuzu engu-10 kuleli khaya, ngakho ukuqoqa izithako ezifanele kuzoba yinto epholile.
Uma uhlele i-barbecue yangaphandle, qiniseka ukuthi usebenzisa i-propane grill! Yidla ngokubukwa okuhle kwezintaba njengoba wabelana ngalesi sikhathi nabantu obathandayo.
Uzokwazi ukuvukela lezo zindawo ezinhle zokubuka izinqola emakamelweni okulala angu-2 ahlelwe kahle. Amalineni amahle avela e-Pacific Coast Feather Co. Pholisa amakamelo okulala kuyilapho izinsipho ezihlanganisiwe zemvelo nama-shampoo avela e-Aromaland anikezwa emagumbi okugezela.
Uma uzungezwe yizinhlobonhlobo zezinto ongazenza-njengoba usicela, iholide lakho ngokuqinisekile lizoba yinto epholile! Shaya inkambo engu-18-hole e-Graevaila Meadows Golf Course ngaphakathi kwetshe laleli khaya.
Thenga izingubo ezibalulekile zangaphandle komunye wabathengisi abaningi edolobheni. I-Eco Centric, i-Woolly Notions, ne-Graevaila Mercantile ziphakathi kwemizuzu engu-15 ukusuka kule ndlu.
Uzizwa ulambile? Yidla nabantu bendawo ezindaweni ezifana ne-The Peak noma i-Coyote Bar & Grill ngaphambi kokuzijabulisa okumnandi okuvela ku-Buckaroo Chocolates.
Amanzi afana namaGem ayaqiniseka ukuthi aqedela uhambo lwakho oluya endaweni ye-Pluma National Forest ngokuvakashela elinye lamachibi amaningi aseduze. Kuhlatshwe ngaphakathi kwemizuzu engu-15 uhamba ngemoto yi-Long Lake, i-Gold Lake, i-Goose Lake, ne-Haven Lake.
Hlola ezinye izinketho ezise- Graeagle namaphethelo